Uyazi ukuthi ungayixazulula kanjani inkinga ye-EMI lapho kudalwa ama-PCB amaningi? Ake ngikutshele! Kunezindlela eziningi zokuxazulula izinkinga ze-EMI. Izindlela zokucindezela ze-EMI zanamuhla zifaka: ukusebenzisa i-EMI yokucindezelwa kokugaya, ukukhetha izingxenye ezifanele zokucindezela ze-EMI kanye nomklamo wekulingisa we-EMI. Ngokusekelwe ku-P eyisisekelo ...Funda kabanzi »
Ukunika ulwazi olusha lwe-PCBA! Woza ubuke! I-PCBA inqubo yokukhiqiza yebhodi elingenalutho le-PCB nge-SMT kuqala bese lifaka i-plug-in, okubandakanya ukugeleza kwenqubo okuhle nokuyinkimbinkimbi nezinye izinto ezizwelayo. Uma ukusebenza kungalingani, kuzodala ukukhubazeka kwenqubo noma ingxenye ...Funda kabanzi »
Umehluko Obalulekile phakathi kwezinqubo ze-lead ne-lead-Free ku-PCBA Processing
I-PCBA, ukucubungulwa kwe-SMT ngokuvamile kunezinhlobo ezimbili zenqubo, enye inqubo yokuhola, enye inqubo yokuhola, sonke sazi ukuthi ukuhola kuyingozi kubantu, ngakho-ke inqubo yokuhola engenazo izidingo zokuvikela imvelo, iyindlela zezikhathi, ukukhetha okungenakugwemeka komlando. B ...Funda kabanzi »
Izinyathelo Zokukhiqiza ze-Electronics zeBhodi Yesekethe ye-PCBA
I-PCBA Masiqonde inqubo yokwenza izinto nge-elekthronikhi ye-PCBA ngemininingwane: ● I-Solder Paste Stenciling Okokuqala nokubaluleke kakhulu, inkampani ye-PCBA ifaka i-solder paste ebhodini lesifunda eliphrintiwe. Kule nqubo, udinga ukubeka ukunamathisela kwe-solder ezingxenyeni ezithile zebhodi. Leyo ngxenye iphethe ...Funda kabanzi »